၂၀၁၀ တုန်းက ရေးဖူးတဲ့ ကဗျာလေးပါ.. သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ပြန်တင်ဖြစ်တာပါ...။
ငါတို့ နှလုံးသားနဲ့ အရာအားလုံးကိုချစ်နိုင်ပါ့မလား
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ စစ်ပွဲတွေ ထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့
ငါတို့ ခေတ်ပြိုင်လူသားတွေ ဘယ်လိုတရားနဲ့
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများ.. မျှဝေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိနိုင် ပါစေ...
တရွေ့ရွေ့ တငွေ့ငွေ့ နံရံပေါ် ပြက္ခဒိန်တွေ
နာရီတွေ နေ့ရက်တွေ ရက်သတ္တပါတ်တွေ
တချို့ နှစ်ကာလတွေက အိဒြေရရ
တချို့ နှစ်ကာလတွေက စီးပွားဖြစ်တယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေက စစ်ဖြစ်တယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေက အိမ်ထောင်ရက်သားကျလို့
တချို့ နှစ်ကာလတွေက အထီးကျန်အရက်သမားအိုကြီးဖြစ်လို့
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာ လူငယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာက နာမည်ကြီး
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာက နာမည်ပျက်တွေနဲ့ အမှုတစ်ရာပွေ
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာ သူများတွေကို ၀ါကျပေးတယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ စစ်အတွင်းအကျဉ်းသား
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာ ပိုက်ဆံရတယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ဘွဲ့ ဒီဂရီ ဆာတီဖီကိတ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေကတော့ ဘာမှမရဘူး
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ မိန်းမငယ်ငယ်ထပ်ရတယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ အကြွေးတွေပါတ်ချာလည်ဝိုင်း
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ လွှတ်တော်အမတ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ အမိမြေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူ
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာ အမေ့ဆီပြန်ဖြစ်တယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ထောင်ဝင်စာမရဘူး
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ စိတ်ရောဂါကုမှာ အထူးခန်းတစ်ခန်းရတယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ပိုက်ဆံမပါလို ဆွဲထုတ်ခံရတယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ကိုယ့်ရည်းစားကို တပည့်တစ်ယောက်ကမသွားတယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ခိုးထားတဲ့မိန်းမကို ပြန်အပ်လို့မရတော့ဘူး
တချို့ နှစ်ကာလတွမှာတော့ သမီးလေးကစ်ကစ်မွေးတယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ယောက္ခမက အမွေတွေထားပြီးဆုံးသွားတယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ဆေးရုံကုတင်ပေါ် ပက်လက်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ရင်းထားတဲ့သဘောင်္နစ်တယ်
တချို့ နှစ်ကာလတွေကိုတော့ ဆုံးသွားတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလို
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ မာဋ်နတ်နဲ့တရင်းတနှီး
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ဘုရားသခင်စကားစမြည်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာတော့ ကောင်းကင်ဘုံမော့မော့ကြည့်
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာ လိပ်တွေလို ကိုယ်ဘက်ကိုယ်ယက်လို့
တချို့ နှစ်ကာလတွေမှာ ငရဲနဲ့နီးနီး မြေကြီးထဲတွင်းတူးဝင်လို့
တရွေ့ရွေ့ တငွေ့ငွေ့ နှစ်ကာလတွေဟာ ဘရိတ်မပါဘူး…
၀ိပဿနာ ငါ့အတွေးအခေါ်ထဲ ဘယ်တော့လာမှာလည်း…
အသက်သုံးဆယ်ကျော်ရင် ရယ်စရာတွေပါးရှား သွားတယ် မမငြိမ်း…
စိတ်ကူးထည် အိပ်မက်တွေတဖြည်းဖြည်း သေးမွှားပျောက်ရှ
ဘယ်နေရာမှ ရှိမနေဘူး မမငြိမ်း
လူကထုံပေပေနဲ့ ဘ၀ဆိုတဲ့ ကစားဝိုင်းထဲမှာ
ရန်ကုန် ဘန်ကောက် စကာင်္ပူ
ကွာလာလန်ပူ တိုကျို ဆိုးလ်
ငွေကြေး ဟိုက်တက်စ် နေထိုင်မှုဘ၀
မိုးလင်းတာနဲ့ အမ်အာတီထဲက ဘ၀က
စကာင်္ပူငွေကြေးက လူတွေကို ခံစားချက်နဲ့ဝေးအောင်
သင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် … မမငြိမ်း
တမေ့တမော မျှော်လင့် … မမငြိမ်းရေ
လူဘ၀ရဲ့ နှစ်သုံးဆယ် ဖြတ်သန်းမှုက
အသက်သုံးဆယ်ဆိုတာ ဘ၀မှာ သိပ်ရယ်ခွင့်မရတော့ဘူး
နေသာရဲ့လားဆိုတော့ ဒီလိုပဲလေ အဆင်ပြေအောင်
ဘာကြောင့်လည်း ဘာကြောင့်လည်း ဘာကြောင့်ပါ
လိုက်လိုက် နားလည် လိုက်လိုက် ရှင်းလင်း
နေသာတဲ့နေ့တွေဆို ညနေတွေကလည်း လှတယ်...
စာအုပ်လေး ဖတ်လိုက် ဘာရယ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး
ဒီလိုပါပဲ .. ဘ၀ကလေလွင့်ပျက်ဆီးတတ်ဖိုလည်းလိုတယ်လေ
ဒါလည်း ဘာရယ်မဟုတ် ပြောသွားတာပါ..
ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ မှတ်မိနေတာ... အခုစာသားတွေလည်း
ဒီကနေ့က ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး နေသာနေတာ...။
ရင်းလည်းရင်းနှီး မရင်းလည်းမရင်းနှီးတဲ့ ကိစ္စတွေ
ယိုးဒယားမိတ် တရုတ်မိတ် ထိုင်ဝမ်မိတ် မလေးရှားမိတ်
ဘာမိတ်မိတ် ကိစ္စရှိသူတွေကရှိတယ် ကိစ္စမရှိသူတွေကမရှိဘူး
ထိပ်စီး နောက်ပိတ် အလယ်ထိုင်
စကားတွေ ပြေကျနေလို့... စကားပြေကဗျာလို့ခေါ်မယ်ဆို
နှိမ့်ချသလို ရိုးကျိုးသလို မိုက်ရိုင်းသလို ရမ်းကားသလို
ရင်းနှီးသလို စိမ်းသလို ကျက်သလို..
ငြင်းရမှာ ပျင်းလို့ ခပ်ပြင်းပြင်းသောက်တယ် ...
ဘာပဲပြောပြော ဘာမှမပြောတာပိုကောင်းတဲ့ လောက
ပြောမကောင်း ဆိုမကောင်း ဖတ်မကောင်း ရေးမကောင်း
အရပ်မကောင်း အလောင်းမလှဆိုသလို ကဗျာလည်း
မကောင်းကျောင်းပို့ ကျောင်းမကောင်း ကန်မကောင်း
(မကောင်းတာသိ မှားမငြိ မြင်သိနာမ်တရား
ရုပ်တရား နာမ်တရားရုပ်နာမ် မှတပါး
သူမရှိ ငါမရှိ သတ္တ၀ါမရှိ)
မရှိခဏ မရှိတာလည်း ခဏခဏ
ဆွဲလို့ ဆက်စပ်၍ ကဗျာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းများနှင့်အတူ အက်ဆေး ဒွန်ဒေရဲ့ သဘောတရားနဲ့ အလုပ်
လျှာတစ်လစ်ထွက်သည်အထိ မရပ်တမ်း အချင်းချင်း enforcement အပိုင်းမှာ အားနည်းနေတာကြောင့် ဖြစ်မယ်။ ဣနြေ္ဒရရ၊
၁) မထူးတော့ဘူး ငါ့ကိုပါ လာသတ်ပါတော့ ၂) စာပေသမား ပန်းတနော်ဦးသန့်(နောင်
ဒီဇင်ဘာ ၈ ကိုမေ့မရဘူး
သူဘ၀အပိုင်းအစထဲမှာ ဒီဇင်ဘာ ၈ ကထည့်ရေးတယ်
သူက စာအုပ်တွေဟာ သူငယ်ချင်းတွေမရှိချိန်မှာ
(စကား အများကြီး ပြောစရာမလိုပါဘူး....
သူ့ထင်မြင်ချက်လေး ပေးပြောဖို့ပဲ လိုတယ်။
နာမည် အရမ်းကြီးစရာ မလိုပါဘူး....
လွတ်လပ်မှု တစ်ခု ချန်ထားဖို့ပဲ လိုတယ်။)
ဒီဇင်ဘာ ၈ က အဲဒီလို တွေးခဲ့သေးတယ်
သူ့ကိုတွေ့ရင် လေထဲက သက်တံ့လို
အခု ဒီဇင်ဘာ ၈မှာတော့
သူမ ပေးခဲ့တဲ့ လူဘ၀အတွက်လက်ဆောင်…
ဒီဇင်ဘာ ၈ က ဘယ်တော့မှအိုမသွားဘူး..
အခုသူမ တစ်နှစ်ထပ်ကြီးမြင့် ရင့်ကျက်လာခဲ့ပြန်ပြီ….
ဒီဇင်ဘာ ၈ ရေ…။
အခန်းလွတ်ထဲမှာ ငါ့ကိုယ်ငါ ခြွေချနေတယ်
လိင်မှုကိစ္စနဲ့ အရက်ကို သိပ်အရသာမတွေ့တော့ဘူး
ဘေစင်ထဲ ရေဖွင့်ပြီး ခေါင်းနှစ်လိုက်တယ်
အနည်းဆုံးတော့ ဒီအခန်းထဲမှာ ကြွက်စုတ်နောက်တစ်ကောင်
ငါခန္ဒာကိုယ်ဟာ ခြစားနေတဲ့ အိမ်ပျက်ကြီးတစ်လုံး
ငါ့ကို သွေးကြောထဲ မူးယစ်ဆေးနည်းနည်းထိုးပေး….။
အန်ကယ်ဆမ်ကို Grand Royal တိုက်လွှတ်လိုက်တယ်…။
သောက်သောက်… အန်ကယ်ဆမ်.. သောက်
အဲဒါ ဂရင်းရွိုင်ရယ်လို့ခေါ်တယ် အန်ကမ်ဆမ်
ဘီအီး အစစ်လောက် အရသာရှိပြီး
တောအရက်လို… စွဲမက်ဖွယ်ပဲ.. အန်ကယ်ဆမ်
ဒီနေရာမှာတော့ ဒီအရက်တွေပဲ တစ်ပြည်လုံး သောက်ကြတာပဲ
ဒေသခံဝီစကီကို အန်ကမ်ဆမ် ခံတွင်းတွေ့မယ် ထင်လို့…
ကျွန်တော်က အန်ကမ်ဆမ်ကို လူပျော်ကြီးမှန်း သိပါတယ်
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာတိုင်းကတော့ အန်ကမ်ဆမ်လို ပျော်မနေနိုင်ဘူး
အန်ကယ်ဆမ်က အိုင်စီး ... အိုင်စီး
ခေါင်းတစ်ငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ အဲဒါ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေကြောင့်
ကျွန်တော် အားမနာပါးမနာ ပြောပါရစေ.. အဲဒါ အန်ကယ်ဆမ်ကြောင့်ပါ
အန်ကယ်ဆမ် လောဘတွေကြောင့် ဆိုပိုမှန်မယ် အန်ကယ်ဆမ်..
ကျွန်တော်တို့ အတိတ်ကို ခဏလောက်သွားကြည့်ရအောင်လား
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ အန်ကယ်ဆမ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းကို
သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့တယ်လေ... အန်ကယ်ဆမ်က ဆိုဗီယက်ရန်ကို
ကြောက်ပြီး နိုင်ငံတိုင်းကို သစ္စာခံခဲ့ခိုင်းချင်တာပဲ အန်ကမ်ဆမ်..
အန်ကယ်ဆမ်က နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြားမှာလည်း ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားမှုရှိတာ
ဗိုလ်ဗထူးသာ မန္တလေးမှာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးလုပ်မထား ခဲ့ဖူးဆိုရင်
အန်ကယ်ဆမ်က ကျွန်တော်တို့ အထက်အညာက ပြန်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး
အန်ကယ်ဆမ်က နှစ်ပေါင် ငါးဆယ်တစ်ရာ ပိုပြီးမြင်ပါတယ်...
ညကြီးမင်းကြီး အိမ်ဖြူတော် ရှေ့က မြက်ခင်းပေါ်မှာ ၃၈ မျဉ်းပြိုင်ကို
မှင်နီတားပဲ.. ကိုရီးယား တောင်မြောက်ခွဲခြား သလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့အပေါ်
ဖိလစ်ပိုင်ကို လွတ်လပ်ရေးပေးမယ် ကတိနဲ့ ပြင်သစ်တပ်တွေကို တိုက်ခိုင်းပြီး
အဲဒါဆို အန်ကယ်ဆမ်ဟာ ဖက်ဆစ်တွေနဲ့ ဘာကွာလို့လည်း...
ဒိန်ဘင်ဖူး တိုက်ပွဲ အပြီးမှာ...အင်ဒိုချိုင်းနားက ပြင်သစ်တွေ
ဂျနီဗာ အစည်းအဝေးကို ကျောခိုင်းပြီး
ကွန်မြူနစ် တားဆီးရေးဆိုပြီးအင်ဒိုချိုင်းနားကို စစ်တလင်း ဖြစ်စေခဲ့တာလည်း
ဦးလေးဟို အတန်တန်တားနေတဲ့ကြားက ဗီယက်နမ် အမျိုးသားချင်း သတ်ဖြတ်ဖို့
သွေးထိုးမြှောက်ပင့်ပြီး ဟနွိုင်းကျသွားရင် အင်ဒိုချိုင်းနား သစ်တောတွေအောက်က
အန်ကယ်ဆမ် ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြဲ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကြာ
တော်လှန်ရေးသမားတွေကြားမှ အန်ကယ်ဆမ်အရှက်ကွဲခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား
အာရှကို လေ့လာဖို့ လိုပါသေးတယ်အန်ကယ်ဆမ်..
အန်ကယ်ဆမ်က ဆီးတိုးကို ဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာ
အဲဒီကတည်းက အန်ကယ်ဆမ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို
ကျွန်တော်တို့ က အန်ကယ်ဆမ်နဲ့ အိုင်ဗင်ကြားမှာ မြေဇာပင် မဖြစ်ချင်ဘူး
ကျွန်တော် တို့ တိုင်းပြည်က ငယ်ငယ် လူဦးရေကနည်းနည်း
လူမျိုးစု အများအပြားနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်တွေ
ပထ၀ီအရ လူဦးရေ အများဆုံးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာနေရတာ
ကျွန်တော်တို့က မဖြောင့်မတ်လို့ကိုမရဘူး အန်ကယ်ဆမ်
အင်ပိုင်ယာတိုင်းမှာတော့ အတက်အကျသံသရာရှိတယ် အန်ကယ်ဆမ်
ကျွန်တော်တို့ အကျပ်အတည်းကာလတွေကို စိတ်မပျက်တော့ဘူး
အန်ကယ်ဆမ်သာ ကိုယ့် ပြည်သူတွေ သတ်သေရတဲ့အထိ
လူချမ်းသာတွေ အာသာရမ္မက် ဖြည့်စွက်ပေးရတာတွေ မလုပ်ပါနဲ့တော့
အန်ကယ်ဆမ်က အီရတ်ကို ဒီမိုကရေစီပေးမယ်ဆိုပြီး ၀င်တိုက်တော့
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းက အန်ကယ်ဆမ်ဟာ ဘယ်စစ်မြေပြင်မှာ
အနိုင်ရဖူးလို့လည်း နိုင်ငံရေးအရလည်း ရှုံးတယ် စစ်ရေးအရလည်းမအောင်မြင်
အဲဒီလောက်ပြောရင် အန်ကယ်ဆမ်.. သဘောပေါက်မှာပါ
ဒါပေမယ့်ပေါ့ အန်ကယ်ဆမ်.. အခုထက်ထိ ကျွန်တော်တို့
တိုင်းပြည်ထဲမှာ ခွေးအတွေ လွှတ်ကြောင်းဖို့ အန်ကယ်ဆမ်
အကျိုးအမြတ်တွက်ကိန်းမှာ အန်ကယ်ဆမ်အတွက် ထပ်တိုးကိန်းတွေ
ထွက်လာမယ်ဆို အန်ကယ်ဆမ်... ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အသံကို
အန်ကယ်ဆမ်က DV လေးဖောက်ပေးလိုက် စကောလားရှစ်လေးပေးလိုက်
လစာတွေ အများကြီး အန်ဂျီအိုအလုပ်အကိုင်လေး ပေးလိုက်နဲ့
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေထဲက အကောင်းစား ဦးနှောက်တွေကို
ပြီးတော့ အမေရိကန် အထင်ကြီးဝါဒ ဇွတ်အတင်းကြီး ရိုက်သွင်းပါရောလား
ဒီပညာတွေ အမေရိကန်ရောက်မှ သင်ရတယ်
ဒီဘာဂါမျိုးက အမေရိကန်ဖြစ်မှ စားရတာမျိုး...
ကျွန်တော်အနေနဲ့ အန်ကယ်ဆမ် စာကြည့်တိုက်တွေ
သုတေသန အလုပ်တွေအတွက် အန်ကယ်ဆမ်ကို လေးစားပါတယ်
အန်ကယ်ဆမ်... ကမ္ဘာကို ဆရာလုပ်မယ့်အစား
ကမ္ဘာကြီးဆီက သင်ယူစမ်းပါ... ပြီးတော့ အတ္တမကြီးပါနဲ့...
အန်ကယ်ဆမ်လို ခြေသလုံးအိမ်တိုင်... မဟုတ်ပါဘူး
အန်ကယ်ဆမ်.. နားထောင်ရတာ မောသွားပီလား
တော်တော်အားနေလားလို့ အန်ကယ်ဆမ် ထင်ချင်ထင်မယ်
ကျွန်တော်တို့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိအောင် အန်ကယ်ဆမ်က
ကျွန်တော်တို့က လက်ဗလာခြေဗလာနဲ့ တရားမျှတဖို့ပြောနေရတာပဲ
အန်ကယ်ဆမ်ကို ကျွန်တော် စိတ်ပျက်ရသေးတယ်
အီရန်မှာ မြောက်ကိုရီးယားမှာ မြန်မာပြည်မှာ
အန်ကယ်ဆမ် နိုင်ငံသားတွေ ကိုထောင်ကျမခံနိုင်ဘူး မဟုတ်လား
ကျွန်တော်တို့ လူကြီးတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်နဲ့ချီတဲ့ အကျပ်အတည်းကို
ခင်ဗျားလူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက် တန်ဖိုး မထားနိုင်ဘူးပေါ့
ဟုတ်လား .. အန်ကယ်ဆမ်...
ကျွန်တော့်ကိုကော မျက်ကန်းမျိုးချစ် ကွန်မြူနစ်လို့
ကျွန်တော့် ဆီမှာ အန်ကမ်ဆမ်လို့ ဒုံးခွင်းဒုံးလည်း မရှိဘူး
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လည်း မရှိဘူး.. အမ် -၁၆ မရှိသလို
ငှက်ကြီးတောင် တစ်လက်တော့ အိမ်ခေါင်ရင်းမှာ ချိတ်ထားတယ်
ရောဂါဘယတွေနဲ့ လုံချာလည်လိုက်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ
အန်ကယ်ဆမ်... နဲ့ မာန်မာနတွေနဲ့ လောင်မြိုက်နေလို့အကျိုးမရှိနိုင်ဘူး...
ဒီကဗျာက အန်ကယ်ဆမ် လိမ္မာလာမလားလို့ပြောကြည့်တာ...
အင်ပိုင်ယာတို့ အတက်အကျ သံသရာမှာ အန်ကယ်ဆမ် ဆက်လက် ကံကောင်းပါစေ...။
ဒီတစ်နေ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ ဒီဘ၀ ပြီး နောက်ဘ၀ ဒါဘာထူးဆန်းလို့လည်း…။
အခုထက်ထိ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ဖိုင်တွဲအဟောင်းကြီးကိုင်လို့…
ကဗျာဟာ မှိုင်းမိနေသလို လှိုင်းမှုနေသလို… မပြောမပြီးမို့ ပြောရင်းနဲ့မော
တော်တော်ဆိုးတဲ့ အခြေအနေပဲ… အချက်ပေးစနစ်တွေ ခေတ်မီဖို့..
နောက်ထပ် သုံးစွဲဖို့ မသင့်တော့တဲ့ ငွေစက္ကူတွေ… မိနစ်ပိုင်းအတွင်း
လက်ထဲက အာမခံတန်ဖိုးဟာ တငွေ့ငွေ့ အငွေ့ပျံလို….
လေတိုက်နှုန်း အတိအကျသိရဖို့.. ခေါင်းမာမာနဲ့ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်
အိမ်ပြန်မယ်စဉ်းစားတိုင်း… စရိတ်အကွာအဝေးက မျှော်လင့်ချက်ကို
မလွယ်ပါဘူး.. အစကတည်းသိသိချည်းနဲ့ မိုက်မဲမိတာ
ဒါဟာ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ မပြီးပြတ်နိုင်တဲ့ မိုးလေ၀သ…
နေပူပူထဲ ရွှဲရွှဲစို လောင်မြိုက် သွေးဆူလွယ်တဲ့အခိုက်တွေ
လွန်ကုန်ပြီ.. ရွေ့ပြောင်းလွယ် အိပ်မက်တွေထဲ
ကမ္ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့… လက်ထဲက လေတွေကို
ဒါဟာ တစ်ဘ၀ပြီးတစ်ဘ၀.. တစ်ယောက်ထွက်သွားပြီး
ဘယ်သူမှ အရေးတယူ ဂရုစိုက်မနေပါ… လောကကြီးက
ငါတို့က တားမြစ်ထားခံရတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်တွေလို…
ငါဟာ နိုင်ငံတော် သမ္မတဖြစ်ကတည်းက
ငါ့ ရန်သူတွေက ငါ့ကို ပိုမုန်းတီးပြီး
ငါ့ မိတ်ဆွေတွေက ငါ့ကို ပိုအမြင်ကပ်လာခဲ့တယ်
သူတို့လိုချင်တာမရလို့ (ငါပေးနိုင်တာလည်း ဘာမျှမရှိ)
ငါ့မိသားစု၊ ငါ့ဆွေးမျိုးသားချင်း၊ ငါ့မိတ်ဆွေတွေ
ငါက ခမ်းခမ်းနားနား မုန်းတိုင်းအမြဲမိနေတာ...
ကိုယ့်ကိုယ် မပိုင်ဆိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့
အခု ငါ့ကိုယ်ငါ အသုံးမကျမှန်း ပိုသိလာရဲ့
ငါဟာ နိုင်ငံတော် သမ္မတပါ..
ငယ်ငယ်တုန်းက လက်မှတ်ထိုးတဲ့လက်က မြို့ကိုဖျက်တယ်
စစ်တပ်က သူတို့သတ်တဲ့ လူတွေအတွက် ငါ့ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်
၀န်ကြီးတွေက သူတို့ခိုးတဲ့ ပိုက်ဆံအတွက် ငါ့ကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်
သူတို့က သမ္မတကြီးရဲ့ သဘောထားဆိုတဲ့ စကားပဲသုံးတယ်
ငါက ထောင်ချောက်ကျနေတဲ့ လူပါ
ဦးနှောက်ရဲ့ အဓိက အလုပ်ဟာ မေ့ပစ်ဖို့တဲ့
လူများ နှစ်ကာလများ.. ဘ၀အဓိပ္ပါယ်များ
ရေကို တံလျှပ်ထင် ရွှေသမင် ရေနစ်ခဲ့ရပြီ…
ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ပဲ ကျဉ်းကျပ်တယ်
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နောက်ကျောမှာ သွေးစို့ခဲ့ရတဲ့
လူတွေ အများအပြား စုရုံးရာအရပ်ကို
မသတီစရာ အရပ်မှာပဲ ပျော်ရွှင်သက်ဝင်ဖို့
(ပိုးလောက်လန်းတို့ မည်သည် ရေပုပ်ရေညစ်တွင်သာ ပျော်ရွှင်မြူးထူးသကဲ့သို့)
ပြောတဲ့အခါတိုင်း ဆင်ခြင်ပေါ့…။ ….။
(စီးမလား ကဗျာစာအုပ်မှာ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
တစ်လက်စတည်း စီးမလား ကဗျာစာအုပ်ကို အေဂျီအမ်ပီ ကဗျာအဖွဲ့မှ ကဗျာဝပ်ရှော့(၁) အနေနဲ့ ဝေဖန်ဖတ်ရှု ဆွေးနွေးကြမှာပါ.. လာမယ် တနင်္ဂနွေ.. ပန်းဆိုးတန်း ဂယ်လယ်ရီ ပန်းဆိုးတန်း အပေါ်လမ်းမှာ နေ့လည် ၂နာရီ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး.. ကဗျာကို ၀ါသနာရှင် ပညာရှင် မည်သူမဆို ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်..။
အယ်ပီ၊ ဆလမ်၊ ကွန်ဆက်ကျူရာယ်...
ဂျပန် နဲ့ အမေရိကန် ရွေးချယ်စရာက နှစ်မျိုးတည်း
လူ လူချင်း လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်လား...
တစ်ခါလာလည်း ရိုမီယိုနဲ့ ဂျူးလိယက်...သီချင်းတွေထဲမှာ
တစ်ခါလာလည်း အိုမာခရမ်... ကဗျာတွေထဲမှာ
၀န်ကြီးပဒေသာရာဇာ နဲ့ ဓာတုကလျာကို ဘယ်သူမှမကိုးကားကြဘူးလား
ဘေးနားက သူငယ်ချင်းက ဘုတောတယ်...
အခု ၂၀၁၀ ကနေ နောက်တစ်ကဒ်ကို
လူဆန်း အသက် ၄၅ နှစ်
စက်ဝိုင်းခြမ်း သံကိုင်းတွေ ဇာတပ်အုပ်ဆောင်း အုပ်ထားတယ်။ အိတ်ကပ်မှာ ငါးရှဉ့်သွေးနှင်းဆီးကြီးကြီး တစ်ပွင့်ပွင့်နေတုန်း အိပ်ပျော်မောနေ၊ အ၀တ်တွေအောက်မှာ ခြေမ လက်မ ပတ်တီးကြိုးနဲ့ ဖဲပြားသဏ္ဍာန် မေမေ ကိုယ်တိုင် ချည်ထားပေးတယ်။ ရေခဲစိမ် ပန်းသီး အအေးချွေးထွက်နေတာ ဘီးတပ်စတီးလ်တွန်းလှည်း အေးစက်နေတာ အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ အနီရောင် မျက်လုံးများ စားဝတ်နေရေး အဖော်မွန်တွေ ဘာဖြစ်နေတာလဲ။
ရာသီ နေပူလွန်းမယ်။ မိုးတစ်ခိုက်ဖြတ်သွားမယ်။ မိုးတစ်စက်စက် တစ်မနက်လုံးကျနေပြီး ညနေချိုချို စောင်းစောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ အမွေးနံ့တလူလူ ကန်တော့ပွဲ ဖယောင်းမီး ပန်းခြင်းပန်းခွေနဲ့ အမှတ်ရမှု ရောင်စုံအရေးအသား A-4 စာရွက်တွေ လေထဲ တဖျတ်ဖျတ်တပ်ထားတယ်။
နေမယ်ဆို နေလို့ရသေးလို့ ဒီအတိုင်းပဲ နေထိုင်နေကြ အတွင်းထိ လူတစ်သိုက် နှလုံးသားကျကျ ရွေ့တွားထူးခေါ်နေ အလွန်ဆုံး မိနစ်ပိုင်းပေါ့။ သစ်သားရောင်ကျယ်သေတ္တာရှည်နား ၀န်ထမ်းတွေ စီးကရက် မွှေးလိုက်တာ မဲအူပြီး လွင့်တက်သွားရမှာလား မြေအောင်ပိုးမွှားတို့နဲ့ နေရမယ်လား။
မင်းဘယ်လိုစီစဉ်ထားလည်း ချစ်ခြင်းသည်တို့ ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်တွေ စောင့်နေကြအားပါးတနာ။ မကြားနိုင်ပါ မပြောမဆိုနိုင်ပါ ဝေမျှလို့မရပါ ဘာမျှမယူခဲ့ပါ။ အဟုန်ပြင်းပြင်းအရောင်တွေ စူးစူးမှောင်မှောင် ထိန်ထိန်လွင်ပြင် ချိုင့်ဝှမ်းတောင်ကြော ထက်ထက်မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မျက်နှာပြင်တွေပေါ် ဖြတ်သန်း ငါ့အမှတ်အသားနဲ့ ငါပြန်ခဲ့ရာလမ်းမှာ တပ်အပ်သေချာ မပြောနိုင်ဘူး။ ရေတွေ အရည်တွေ။ ချက်ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ ပွင့်ဖတ် ပွင့်ချပ် အင်္ဂါအိမ်ကြီးထဲ ငါ ဦးစောက်ကျွမ်းပြန်လည်မွတ်နေပြီ…။
အဲဒီဖိုင်ကိုဆေ့ဖ် ထား ဟာ့ဒ် ကော်ပီလဲကူးထား
လှသန်း မိုးဇော် တပ်လှန့်ထား
မိုးဝေးရေ.. ဖုံးနံပတ်တွေ ရသလောက်ပြန်ရှာ
အပြင်မှာ မိုးတွေတအား ရွာကောင်းရွာနေလိမ့်မယ်
လက်ဗွေရာ ခြေဗွေရာတွေ ရသလောက်စုဆောင်း
အငယ်တန်းသတင်းထောက် နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက် အမြန်လွှတ်
ဘာတွေ့လဲ ဘာမြင်လဲ ဘာသတင်းရသလဲ ချက်စားလို့ရပြီလား
သူ့ဘ၀ သူ့ဇာတ်ကြောင်း/သူ့ဇာတ်ကြောင် သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့သမျှ ဇာတ်ကောင်တွေ/ဇာတ်ကောင်မတွေ
မွေးသက္ကရဇ် အဖေနာမည် အမေနာမည် ( နောက်ဘာတွေ ဆက်ဖြည့်စွက်ရအုန်းမလဲ)
သူ့ချစ်သူ သူ့မုန်းသူ သူ့ရန်သူ သူ့မိတ်ဆွေ ခင်ဗျား ဘယ်လောက်သိထားသလဲ
သူ့ အသုဘ လူဘယ်လောက်လာလဲ နတ်ပြည်က ဘယ်လောက်လာလဲ ငရဲပြည်ကပရိသတ်ပိုများလား
စစ်တမ်းကောက်အဖွဲ့ ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် စာရင်းပြုစုပါစေ
သေပြီဆိုမှတော့မလှုပ်တော့ဘူး ( တယောက်က၀င်နောက်တယ်) တကယ်က သူအသက်ရှင်နေတုန်းက
လှုပ်နေရမှ ကျေနပ်သူ သူ့မိတ်ဆွေဆိုသူတွေ ကွာစေ့နွှာရင်း ၀ါးရင်း ရေနွေးကြမ်းငှဲ့ရင်း အိနြေ္ဒဆည်ရင်း
ပြန်ပြောပြနေကြ သူတို့ထိတွေ့မိသမျှ သူ့အကြောင်းတွေ အထွေထွေ အပြားပြား
သူသေသွားပြီ နောက်ထပ် သူ ဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူး၊ သူများပြောတဲ့သူ့အကြောင်းတွေလဲ
သူမကြားနိုင်တော့ဘူး၊ သူဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ (တကယ်တော့ ‘သူ’ ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှလဲ မရှိခဲ့)
လောကဆိုတာ တကယ်မရှိတဲ့ အကြောင်းတွေပဲ အရှိလုပ် သိတယ်ထင်ကြ ပြောကြ ဆိုကြရတာ
ခုတော့ ခင်အောင်အေးက သူသေသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း
သူ့မျက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေ သူမျက်စေ့မှိတ်ပြီးသွားကာမှ ဖြစ်ပျက်တဲ့ အကြောင်းတွေပြန်ပြောနေတော့
ဘယ်လိုလဲ ဖဲကောင်းလား ကုလားပျောက်နေလား သူ့နာမည်တ, လိုက် ပန်းကန်ဖဲ ဆွဲတက်တယ်
ဘုန်းကြီးပွဲ အတွက် အရင်ဆီသတ်တော့မလား ကြက်သားဟင်း လုံးတော့မလား ကွမ်းအစ်ပြင်ပြီးပလား
သမိုင်းမှာ ကြက်ရေးငှက်ရေးဆိုရင် ဘယ်သူ့နံမယ်တွေ အတည်ပေါက်ပြောကြမှာတုန်း
လူကတော်တော်ကြီးတော့မှ ကမောက်ကမတွေ တော်တော်လုပ်သွားတာပဲ
(ကဗျာတွေ တော်တော်ရေးသွားတာတော့ ဘယ်သူမှ ဆေးဖော်ကျောဖက်လုပ်ပြီး မပြောကြ)
လူပျံတော်လေးလို ၀ဲကြည့်နေတယ် အသုဘရှု လာကြသူတွေကို
“တလောက သေသွားတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းအကြောင်းတောင် ကဗျာစပ်လိုက်သေးတာ”
လို့ ပြောတဲ့ သူက ပြော “နိမိတ်ဖတ်သွားတာပေါ့လေ” မှတ်ချက်ချသူကချ
စကားပြေကို ကဗျာလုပ်ယူဘို့ ဘယ်အပလီကေးရှင်းကို အတက်ခ်ျ လုပ်ရမလဲ
၀ါကျသစ် စကားပြေကဗျာ စမ်းသပ်ရင်း သူ့ခမျာ ရေတိမ်နစ်ရရှာတာ
ဇာတ်က အခိုင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး မင်းသားဦးစားပေးဇာတ်ပဲ ပရိုဂျူဆာ လဲ အိပ်ပျော်စားဝင်အောင်
နောက်တနေ့ မျက်နှာသစ်ဖို့.. မဟုတ်ဘူးလေ ဆပ်ပြာနဲ့သွားတိုက်ဆေးအကြောင်းရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး
ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး နို့- ဒါဖြင့်…။ ။
၂၇၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၉
၂၃း၁၂ နာရီ ဘန်ကောက်စံတော်ချိန်
ငါတို့ စာပေက ထုတ်ဝေပါတယ်...
ငါမှာ မနက်ဖြန်တွေ မရှိတော့ဘူး
ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တွေထဲမှာ ရေးမှတ်စရာအဖြစ်အပျက်တွေ မရှိတော့ဘူး
ဘ၀ဆိုတာ တစ်ချိန်ချိန် ဖုန်တွေကြားမှာငြိမ်သက်မွန်းကျပ်
မနေ့က ကတည်းက အသိက ငါ့ဆီမှာ မနက်ဖြန်တစ်ချို့
ချက်ခြင်းကြီး လက်ငင်းကြီး ငါမှာ နောက်ထပ်ပေးချေစရာ
မတရားဝင်ရောက် ဖျက်သိမ်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ
ကမ္ဘာကြီးလည်တာမှန်ရင် အဲဒီမနက်ဖြန်တွေ ငါ့ဆီပြန်လာမှာလား
ငါက မရေမရာ အနာဂါတ်နဲ့ မနက်ဖြန်ကို ချိန်ရွယ်ကြည့်တယ်
အရင်လို ငါ့ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြန်ပေးပါ မနက်ဖြန်..
ဘာဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်ဟာ မနက်ဖြန်တွေရှိနေသင့်တယ်မဟုတ်လား
လူမသေခင် မနက်ဖြန်တွေ ဘာလို့အရင်သေနေတာလည်း..
ငါက ဘ၀မှာ ဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးမှ မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူး
ဘယ်သူမှမနက်ဖြန်တွေ လုယက်မခံရဖို့ ငါဆုတောင်းတယ်
အခုတော့ ငါဆီမှာမရှိတော့တဲ့ မနက်ဖြန်အတွက်
ကင်းဗတ်စ ပေါ်မှာ ပွင့်တယ်၊
သူမ( her ) သက်သက်
သူမဟာ ကောက်စိုက်ရင် အရမ်းမြန်တယ်
သူမ (her) စက်ချုပ်ရင် အရမ်းသေသပ်တယ်
သူမ (her) သက်သက်
သက်သက် မဲ့ ခေါင်းငဲ့ကြည့်တယ်…
သက်သက် (her) တည်ကြည်တယ်
သက်သက် (her) လေးနက်တယ်…
သက်သက်မဲ့ သူမ (her) မြို့ပေါ်တက်သွားတယ်
သက်သက်မဲ့ သူမ(her) နိုင်ငံခြား ထွက်သွားတယ်
သက်သက် (her) မင်းကြိုက် စိုးကြိုက်တဲ့
သက်သက် အမျိုးတစ်သိုက် က အဲ့လို့
သက်သက် ကို တန်ဖိုးထားတာ..
သက်သက် (her) သက်သက်မဲ့
သူမ (her)…. သက်သက်
သက်သက်မဲ့ချည်းတော့… သူမ (her)
အသက်သုံးဆယ်ကျော်ရင် ရယ်စရာတွေပါးရှား သွားတယ် မမငြိ...
ဒီတစ်နေ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ ဒီဘ၀ ပြီး နောက်ဘ၀ ဒါဘာထူး...